सावधान! हतार हतारमा यौन सम्पर्क गर्दा यसो हुनसक्छ !!!
January 18, 2018 adminLeaveaComment on सावधान! हतार हतारमा यौन सम्पर्क गर्दा यसो हुनसक्छ !!!
यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् र हुदैछन् पनि, ती अध्ययनहरुबाट यौनका बारेमा नयाँ-नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ र लागी रहेको पनि छन् । केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ । सम्भोग सुरु गर्नुअघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा फोर […]
January 18, 2018 adminLeaveaComment on कस्तो हुन्छ पहिलो पटकको यौन सम्पर्क ?
साधारणत: यौनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी भन्दछन् । यौनिच्छद नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ, जुन स्त्रीको यौनीको मुखमा टासिएर रहेको हुन्छ । यसले यौनीको मुखलाई पूर्णतया बन्द गरेको भने हुदैन । समान्यतया जव केटीहरुको पहिलो यौन सम्पर्क हुन्छ, त्यसबेला योनिच्छद तन्किन्छ र च्यातिन्छ । जसले गर्दा केही असजिलो हुने र रगत आउने हुन्छ । योनीद्धारको […]